Banyere Anyị - Liaocheng Delly Metal Materials Co., Ltd.
Liaocheng delly metal material Co., LTD dị na Liaocheng Economic Development Zone, north of Jinan Handan expressway, ọdịda anyanwụ nke Beijing Jiulong Railway, 50 nkeji si Jinan, isi obodo nke Shandong Province, Ọ na-ewe ihe karịrị awa 3 iji ruo. Qingdao ọdụ ụgbọ mmiri mba ụwa. nwere ọnọdụ ala dị elu yana njem dị mma.
Isi azụmahịa nke ụlọ ọrụ
ọkọlọtọ European, British ọkọlọtọ n'akuku ígwè, ígwè efere. square tube, square tube, gburugburu ígwè, warara ígwè, H-beam, 1-beam, ọwa ígwè na ndị ọzọ ngwaahịa.Materials: s235jr, s235jos275jr, s275j0s275joh, s355jr, s355j0.s355j0h. s355j0w. s355nl, s355ml, s450j0 usoro. Ụkpụrụ ngwaahịa: bsen10025/2-2004, bsen10210/2-2006, bsen10219-2-2006, bsen10204-3.1-3. 2 asambodo chọrọ.
Ụlọ ọrụ kwekọrọ na àgwà mbụ, na-agbaso ụkpụrụ ahụ, n'eziokwu na ntụkwasị obi. ụkpụrụ nke ndị ahịa na-ebu ụzọ nweta ndị ahịa iji nweta mmesi obi ike nke ngwaahịa. Site na harc
na-arụ ọrụ, ndị ahịa anyị nọ na mba niile ma nweta aha ọma na nlọghachi. Site n'enyemaka nke ọtụtụ ndị ahịa na ịrụsi ọrụ ike nke ndị ọrụ anyị, ụlọ ọrụ ahụ dị ugbu a n'ọla edo nke mmepe ụlọ ọrụ. N'ime usoro mmepe n'ọdịnihu, anyị dị njikere ịrụ ọrụ aka na ndị ahịa anyị iji mepụta ọmarịcha
Mmepe ụlọ ọrụ na otu
Ụlọ ọrụ anyị tọrọ ntọala na 2010, mgbe ihe karịrị 10 afọ nke mmepe, ụlọ ọrụ aghọwo onye ndú na European ọkọlọtọ ígwè na British ọkọlọtọ ígwè ụlọ ọrụ, na-guzobere ya pụrụ iche ụlọ ọrụ otu. Ndị otu anyị abụghị naanị na mbụ nke ụlọ ọrụ ígwè na nkà na ụzụ, ma na-aṅa ntị karị na ọchịchọ nke ndị ahịa. Ọtụtụ n'ime anyị etinyewo aka na ụlọ ọrụ nchara maka ihe karịrị afọ 10. yabụ anyị nwere ike ịghọta ngwa ngwa mkpa ndị ahịa. Anyị nwere nghọta ziri ezi nke ụdị, ihe, ojiji, nkọwa na akụkụ ndị ọzọ nke ígwè. A na-ebupụ ngwaahịa anyị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, South Korea, North na South America, Middle East na obodo na mpaghara ndị ọzọ. A na-eji ya eme ihe na ụlọ ọrụ ihe owuwu, ụlọ ọrụ mmanụ, nrụpụta igwe na mpaghara ndị ọzọ. N'ihi na ọrụ ọkachamara na ngwaahịa anyị nọ n'ọnọdụ
Anyị bụ ndị ọkachamara na arụmọrụ na ule nke European ọkọlọtọ ígwè na British ọkọlọtọ ígwè ngwaahịa. Anyị nwere ogbako nke onwe anyị, nyocha ụlọ nyocha, ndị otu ngwa agha na-arụkọ ọrụ ọnụ, na-eme otu nkwụsị ọrụ na ụlọ ọrụ nchara. Anyị na-aga n'ihu na-emepe emepe ma melite nkà na ụzụ na ọrụ anyị iji gboo ọchịchọ ndị ahịa anyị maka ngwaahịa na ọrụ ígwè ọkọlọtọ nke Europe na British ọkọlọtọ.
ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso iguzosi ike n'ezi ihe, ọkọlọtọ, ụkpụrụ ọrụ nke ọma, na nkà na ụzụ na ọrụ iji merie ahịa, ọrụ iji nweta aha, raara onwe ya nye iji nye ndị ahịa anyị àgwà, ịrụ ọrụ nke ọma, ngwa ngwa ngwaahịa na ọrụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu gbasara ụlọ ọrụ anyị, ị nwere ike ịhapụ ozi ma ọ bụ zitere anyị email. Anyị ga-alaghachikwute gị ma dozie nsogbu ahụ n'oge
1. 2015 Kuwait ọdụ ụgbọ elu
3. Ihe mkpuchi mgbidi nke gọọmentị Hong Kong na 2010